Madaxweynaha Soomaaliya Oo Ka Qayb Galay Shir Lagaga Hadlayey Dib U Eegida Dastuurka
(Hadhwanaagnews) Thursday, December 07, 2017 16:12:13
Muqdisho(HWN):-Shir lagaga hadlayey hanaanka dib u eegista dastuurka dawlada federaalka ah ee Soomaaliya ayaa lagu qabtay xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya.
Kulankan oo uu shir gudoominayey madaxweynaha dawlada federaalka ah Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa waxa ka soo qayb galay raysal wasaare Xasan Cali Khayre, madaxda maamul goboleedyada, gudoomiyaha golaha shacabka, guddida madaxa banaan ee dastuurka iyo guddiyada dastuurka ee labada aqal ee baarlamaanka.
Shirkan ayaa laga jeediyey warbixin ku saabsan hanaanka dib u eegista dastuurka iyo halka uu marayo iyada oo badhtamaha sanadkan soo socdana la qabto shirweyne dib loogu eegayo dastuurka federaalka ah ee Soomaaliya.
Dawlada soomaaliya ayaa
qorshaynaysa in mudada ka horaysa sanadka 2020-ka la dhamaystiro dastuurka dawlada federaalka isla markaana loo qaado afti dadweyne.
Madaxweynaha Farmaajo iyo dawlada Raysal wasaare Xasan Cali Khayre ayaa u muuqda inay dedaal dheeraad ah galinayaan sidii loo dhamaystiri lahaa dib u eegista dastuurka iyada oo la qorsheeyey miisaaniyad u gaar ah oo loogu tala galay in lagu dhamaystiro dastuurka dawlada federaalka ah.